Arsenal oo weli isha ku haysa laacibka Busquets | Dhaliye
Published on August 2, 2015 by Mahad · No Comments	· 2,242 Reads
Kooxda Arsenal ayaa diyaar u ah inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka qadka dhexe naadiga Barcelona oo lagu magacaabo Sergio Busquets.
Naadiga ka dhisan waqooyga magaalada London Arsenal ayaa wado qorshe cusub oo ay kaga dhaadhicinayso ciyaaryahan Sergio Busquets inuu kusoo biiro Arsenal waxayna Arsenal adeegsanaysaa xeelad cusub si ay u keento Sergio Busquets.
Xeeladda Ay kooxda Arsenal u isticmaalayso sidii ay garoonka Emirates ay u keeni lahayd bur buriyaha reer Spain Sergio Busquets ayaa lagu sheegay inay u bandhigtay lacago mushaaraad ka badan kuwa uu hadda ka qaato naadigiisa Barcelona.
Ciyaaryahanka caalamiga dalka Spain Sergio Busquets oo qadka dhexe ka ciyaaro ayaa wuxuu ka qaataa kooxdiisa Barcelona lacago mushaaraad dhan 120 kun todobaadkii laakin Arsenal ayaa u soo bandhigtay mushaaro ka sareeyo 20 kun kuwa uu hadda qaado waxayna Arsenal diyaar ula tahay Sergio Busquets inay siiso mushaaro gaaraya 140 kun oo gini isbuucii.
Sergio Busquets waa 26 sanno jir kusoo bar baaray xerada tababarka kooxda Barcelona ee La Masia.